HORMARKA NOLOSHA | Wararka Dalka Iyo Dibada
Jul 27, 2018 - jawaab
Hormar: waa eray tilmaamaya in uu qofku guul ka gaaro nolosha. Nolosha qof kasta oo bin aadan ahna waa labo:
 Nolosha Aakhiro:
Diinteena islaamka ee suuban waxay ina bartay in dhimashada qofka kadib ay jiri doonto nolol dhab ah oo looga abaal marinayo qof kasta wixii uu soo shaqaystay noloshiisii aduunyo.
Hadaba guusha qofku ku guulaysto Nolosha Aakhiro ama uu hormar ka gaaraa waa (in uu ka badbaado Cadaabka Eebbe).
Waxayna ku imaan kartaa guusha nolosha aakhiro in aad aduunka si wanaagsan ugu dhaqanto diinta islaamka , camalkaagana aad hagaajiso.
Camalka qofkuna wuxuu ku hagaagaaa saddex arimood markii laga helo:
1- Waa in uu qofku aqoon u yeeshaa waxa uu camal ahaan u samaynayo Allaahna uu ugu dhawaanayo.
2- In uu u sameeyo camal kasta Allaah dartiis , oo uu ka dhawro qalbigiisa marka uu camal ama cibaado gudanayo u qasdida cid aan Allaah ahayn.
3- In uu uga daydo camal kasta oo uu samaynayo Nabi Maxamed صلى الله عليه وسلم , uuna iska dhawro samaynta wax cibaado ah ama Allaah loogu dhawaanayo oo uusan samayn ama jidayn Nibigeena Suuban صلى الله عليه وسلم.
Guusha nolosha aduunka waxa ay tahay in aad noqoto qof ay ku tiirsanyihiin bulshada uu la dhaqanyahay.
Haddii uu gaaro qofku heer dadku ay u baahdaan mar walba waxaa la oran karaa wuxuu gaaray guushiisa dhabta ah ee nolosha aduunka.
Aragti ahaan waxaan aaminsanahay in aad ku gaari karto in ay dadku kuu baahdaan oo kaliya , aduguse aadan u baahan laba arimood mid kood:
1- Aqoon: waa in aad yeelataa aqoon aysan dadka in badan oo kamid ah lahayn.
Si aad taa u gaadhana; waa in aad waqtigaaga aduun u qaybisaa saddex qaybood:
– Mid aad u shaqaysato guusha Nolosha aakhiro.
– Mid aad ku barato aqoontii aad ku gaari lahayd guushaada aduunka.
– Mid aad ku nasato si aad awood ugu yeelato labadaas.
Ogowna akhristoow aqoonta ku gaarsiin karta guusha nolosha in ay kaaga baahantahay; dadaal iyo hamigaaga oo mar walba kuu muuqda ilaa aad ka gaarto.
2- Dhaqaale: waa in aad yeelataa ama tabacdaa dhaqaale aysan haysan dadka in badan oo kamid ah , si ay kuugu baahdaan mar walba.
Wuxuuna u baahanyahay qofku si uu ugu tilaabsado hormarkaas in uu yeesho; kartidii , caqligii , aqoontii ama xirfadii uu ku abuuri lahaa dhaqaalahaas.
Hadaba Mudane/Marwo madoonaysaa in aad hanato guusha nolosha iyo hormarkeeda dhabta ah?. Haday tahay jawaabtaadu haa: u istaag arimahaas aan kuusoo sheeqay , kana dhigo fariintaan kooban tilmaan ku xasuusisa mar walba himiladaada.
Guusha Nolosha aduunka (in ay dadku kuu baahdaan mar walba aduguse aadan u baahan) waxaa laga yaabaa in ay ku gaarsiiso mid kamid ah labadii qodob ee aan kuusoo sheegay (aqoonta iyo dhaqaalah) , hadii aad isku dartana waxaad tahay qofka ugu guusha wacan.